antony nanosika ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy hanatanteraka ilay tetikasa lala-mikodana. Toy ny eny amin’ny By pass izy io raha ny vaovao azo izay fantatra fa hiainga eny Andavamamba handalo ny lalana eny amin’ny digy, hihazo an’Andranonahoatra, mipaka hatreny Fenoarivo Atsimondrano. Kaominina dimy raha kely no voakasika amin’izany toy ny kaominina Andranonahoatra, Itaosy, Ambavahaditokana, Ampitatafika ary Fenoarivo izay samy eny Atsimondrano avokoa. Efa mamolavola ny drafitra fiahiana ireo hafindra toerana ( DFVT) ankehitriny ny minisitera tompon’andraikitra ary hiroso amin’ny fanadihadiana maro isan-tsokajiny. Anisan’ireny ny fisian’ireo trano na tany na fotodrafitrasa hafa mety hokitihina…. Efa nanomboka ny 20 janoary lasa teo izany fanadihadiana izany hifarana ny 18 febroary. Ho an’ny fokontany Fenoarivo, kaominina Fenoarivo manokana dia nisy ny 23 janoary lasa teo ny fivoriambem-pokonolona nentina nampahafantarana ity tetikasa ity, hahafahana mampiomana ny olana. Tanjona amin’izao tetikasa izao moa ny hahafahana miady amin’ny fitohanana lavareny eto an-drenivohitra ankoatra ny fanitarana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.